२८ श्रावण २०७७ | August 12, 2020
खानुहोस् लौका, हटाउनुहोस् तनाव र अनिन्द्रा
२१ श्रावण २०७७
काठमाडौँ । लौका बारी खेतमा सजिलै फल्ने तरकारी हो । लौकालाई तरकारी मात्र नभई बर्फी, हलुवा, रायता बनाउनका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ । यसमा विभिन्न किसिमको पोषक तत्वको भण्डार हुन्छ । लौकाले गर्मीमा थकानबाट जोगाउँछ, शरीरलाई चिसो र ताजा राख्दछ । गर्मी महिनामा धेरै पसिना आउने भएकाले शरीरमा घटेको पानी भरपाइ गर्ने काम यसले गर्छ । शरीरभित्रको फोहोर फाल्ने मात्र नभई नाकबाट रगत आउने, डण्डीफोर…विस्तृत समाचार »
यी रोगबाट छुटकरा पाउन खानुहोस् तिते करेला
२१ अषाढ २०७७
काठमाडौँ । खादा तीतो भएपनि करेला स्वास्थ्यका लागि अति लाभदायक छ । व्लड प्रेसर लो भएकाले धेरै खान नहुने करेला, स्वादमा जति तितो हुन्छ स्वास्थ्यमा उतिनै फाइदाजनक छ । करेलाले खानामा रुचि बढाउँछ । करेला खादा छालाको सङ्क्रमण, चिलाउने खटिरा, घाउ आदिलाई हटाउँछ । करेलाले खाएको कुरा राम्ररी पचाउने हुँदा पेटसफा राख्दछ र कब्जियत हुन दिँदैन । पेटसम्बन्धी विभिन्न रोगजस्तै, ग्याष्ट्रिक, अल्सर आदिलाई कम गर्दै लैजान्छ…विस्तृत समाचार »
के हस्तमैथुनले शरीरलाई बेफाइदा गर्छ ?
११ अषाढ २०७७
काठमाडौँ । एकथरीको भनाई छ हस्तमैथुनले शरीरलाई बेफाइदा गर्छ । तर यो विल्कुलै गलत हो । हस्तमैथुनले स्वास्थ्यमा कुनै हानी हैन बरु, यसले यौन आवेग शान्त गर्छ । यौन कुण्ठा हटाउँछ । मनोविकार हटाउँछ । अझ हस्तमैथुनले बलात्कार जस्ता आपराधिक कृत्य कम गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । हस्तमैथुनलाई स्वास्थ्यका लागि राम्रो र सामान्य मानिन्छ । हस्तमैथुन आनन्द अनुभूत गर्ने प्राकृतिक तरिका हो । यसले स्वंमलाई आनन्द…विस्तृत समाचार »
१५ प्रश्नको जवाफमा पूर्वयुवराज पारसकी छोरी पूर्णिकाले भनिन्– मैले आफ्नो ‘ड्रिम ब्वाइ’ भेटिसके
२५ बैशाख २०७७
२५ वैशाख, काठमाडौं । राजतन्त्र गएपनि पूर्वराजपरिवारको चर्चा छँदै छ । पूर्वयुवाराज पारस शाह र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह आफ्नै भूमिकाका कारण चर्चामा छन् । उनीहरुकी जेठी छोरी पूर्णिका शाहमाथि पनि आम नेपालीको नजर छ । उनी अहिले अध्ययनका क्रममा थाइल्यान्डमा छिन् । इन्टरनेसनल बिजनेसमा स्नातक अध्ययनरत उनी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो तस्वीर र स्टाटसहरू अपडेट गरिरहन्छिन् । १९ वर्षमा हिँडिरहेकी पूर्णिका अहिले धेरै कुरा बुझ्ने भइसकिन्…विस्तृत समाचार »
मास्क लगाउँदा गर्न नहुने गल्ती
२ बैशाख २०७७
२ वैशाख, काठमाडौं । चीनको बुहानबाट प्रारम्भ भएको कोरोना भाइरसको महामारीले केवल पाँच महिनामा विश्वलाई नै शिकार बनाइसकेको छ । तिब्र गतिमा फैलिइरहेको यो प्राणघातक भाइरसलाई रोक्नका लागि विश्वभरीमा लकडाउनको स्थिति छ । उक्त भाइरसको अहिलेसम्म न त कुनै औपधि पत्ता लागेको छ, न त कुनै खोप नै बनेको छ । त्यसैले नेपालका अधिकांश सार्वजनिक स्थलहरुमा निस्कनेका लागि प्रत्येक नागरिकलाई मास्क लगाउनु अनिवार्य गरिएको छ…विस्तृत समाचार »
घरबाहिर कोरोनाको संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?
७ चैत्र २०७६
७ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम बढेसँगै घरबाहिर निस्कन डराउने धेरै छन् । बिना काम घरबाहिर ननिस्कन र निस्कनै परे मास्क (मुखावरण) को प्रयोग गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ । घरबाहिर निस्किँदा के गर्ने ? – घरबाहिर निस्किँदा सकेसम्म सर्जिकल मास्कको प्रयोग गर्ने – सर्जिकल मास्क नभए रुमालले मुख छोप्ने वा कपडाको मास्क प्रयोग गर्ने – कसैसँग हात नमिलाउने – हात मिलाउनुको…विस्तृत समाचार »
संक्रमणबाट बच्न यसरी बढाउनुहोस् प्रतिरोधात्मक क्षमता
६ चैत्र २०७६
काठमाडौँ । प्रतिरक्षाले हामीलाई रोगहरुबाट सुरक्षित राख्छ। प्रतिरोधक क्षमताले हाम्रो शरीरमा भएको जीवाणुहरुको संक्रमणबाट बचाउने भूमिका खेल्छ। रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता बढी भएका मानिसहरु कम बिरामी हुन्छन् भने यो क्षमता कम भएका मानिसलाई धेरै रोग लाग्छ । तर, कसरी रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा हुँदैन । प्रतिरक्षा शक्ति बढाउन तपाईले दैनिक उपयोग गर्दै आएका खानेकुरालाई मिलाएर खाए मात्र पुग्छ । भान्साकोठामा उपयोग…विस्तृत समाचार »
यस कारण मृगौला फेल हुन्छ, यसरी बचाउनुहोस् मृगौला
३ चैत्र २०७६
काठमाडौँ । मृगौला मानव शरीरको अति महत्वपूर्ण अंग हो । यसले शरीरको विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ । मृगौलाकै कारण हाम्रो शरीरमा रगतमा पानी, नुन तथा अन्य खनिजपदार्थलाई सन्तुलित बनाएर राख्छ । जब मृगौलाको कार्यक्षमता कम हुन्छ वा फेल हुन्छ, शरीरमा रहेको विषाक्त रासायनिक पदार्थ, तरल पदार्थ आदि बाहिर निस्कन पाउँदैन । हाम्रो शरीरमा दुईवटा मिर्गौला हुन्छन्। दुबै मिर्गौलाले बराबर काम गर्छन्। एउटा मिर्गौलाको…विस्तृत समाचार »
माछाको तेल जसले हृदयघात र मुटुजन्य रोगबाट बचाउँछ
२९ फाल्गुन २०७६
काठमाडौं । माछाबाट बनेको तेल सेवनले मुटुजन्य रोगहरु लाग्ने सम्भावना कम हुने बताइएको छ । नियमित रुपमा माछाबाट बनाइने खाद्यपदार्थले अल्पायुमा मृत्यु हुने र मुटुजन्य रोगहरु जस्तै मुटु दुख्ने र हृदयघातबाट बच्न सकिने हालै गरिएको एक अध्ययनले पत्ता लगाएको हो । बेलायतको तफ्स विश्वविद्यालयका कार्डियोभास्कुलर न्युट्रिसन लेबोरेटरीका निर्देशक र वरिष्ठ वैज्ञानिक एलिस लिचेस्टिनका अनुसार ४० वर्षदेखि ६९ वर्ष उमेरसमूहका पाँचलाख व्यक्तिहरुमा गरिएको उक्त शोध केन्द्रित…विस्तृत समाचार »
​रक्सी खानेलाई कोरोना नलाग्ने होइन, कोरोना संक्रमणबारे भ्रम र यथार्थता: डा.रवीन्द्र पाण्डे
२३ फाल्गुन २०७६
२३ फागुन, काठमाडौं । विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलदै गएको छ । कोरोना भाइरस सम्बन्धि गलत प्रचारले पनि कोरोनाको त्रास बढाएको छ । स्थानीय तहका सरकारी निकाय देखि सामाजिक सञ्जालहरुमा समेत कोरोना भाइरसको विषयमा धेरै कुराहरु आएका छन । तर, कोरोना भाइरसको संक्रमण, यसबाट बच्ने उपायबारे हुने गलत भ्रम र यथार्तताबारे आज हामी तपाईलाई जानकारी गराउँदै छौं । जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रवीन्द्र पाण्डे(समिर) ले कोरोना…विस्तृत समाचार »
जनता समाजवादीको विज्ञप्ति बौद्धिक दिवालियापनः प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
२७ साउन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिको एक अंशप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी सचिवालयले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ। उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मंगलबार बिहान फेसबुकमार्फत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजवादी पार्टीको विज्ञप्तिमा उल्लेख ‘केपी ओली सरकारको कुनै ठोस कार्ययोजना नरहेको र प्रधानमन्त्री शारिरीक र मानसिक दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर रहेको’ भन्ने टिप्पणी अत्यन्त दुराशयपूर्ण र खेदजनक भएको बताएका हुन्।
नेता विष्णु पौडेलका पीएसओमा कोरोना संक्रमण
२५ साउन, काठमाडौँ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका अंगरक्षकलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । आइतबार पीएसओमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि नेता पौडेल आइसोलेसनमा बसेका छन् । उनका पीसओलाई प्रहरी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । यद्यपी उनलाई पनि लक्षण भने नदेखिएको महासचिव पौडेलको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । उनले शनिबारमात्रै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका थिए ।
‘बरु कोरोनाको ओखती फेला पर्ला, नेकपा झगडाको ओखती नपाइने भो’
२४ साउन, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता गोकुल बाँस्कोटाले पार्टी झगडाको ओखती नपाइने जस्तै भएको बताएका छन्। ‘बरु कोरोनाको ओखती फेला पर्ला तर नेकपा झगडाको ओखती कमसेकम काठमाडौँमा चाहीँ नपाइने भो जस्तो छ’, बाँस्कोटाले ट्विट गरेका छन् ।
न्यूजिल्याण्डको ओक्ल्याण्डमा कोरोना शुन्य भएको १०२ दिनपछि फेरि संक्रमण
२८ साउन, काठमाडौं । न्यूजिल्याण्डको सबैभन्दा ठूलो शहर ओक्ल्याण्डमा पुनः लकडाउन लागु भएको छ। १०२ दिनसम्म स्थानीय संक्रमित बिहीन रहेको न्यूजिल्याण्डमा चारजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि पुनः ओक्ल्याण्डमा लकडाउन लागु गरिएको हो। ओक्ल्याण्डमा तीन दिनका लागि लकडाउन लागु गरिएको न्यूजिल्याण्डका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।
बेरुत विस्फोट : ढल्यो लेबनान सरकार
२७ साउन, काठमाडौं । लेबनानका प्रधानमन्त्री हसन दियाबले राजीनामा दिएका छन्। गत मंगलबार राजधानी बेरुतमा भएको विस्फोटलाई लिएर उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका हुन्। उनले हिजो साँझ त्यहाँको राष्ट्रिय टेलिभिजनमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ।
भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई पनि कोरोना
२६ साउन, काठमाडौँ ।
भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई पनि कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टी भएको छ । मुखर्जीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटमा आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएका छन्। उनले पछिल्लो साता आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबैलाई कोरोना परीक्षण गर्न र आइसोलेसनमा बस्न सुझाएका छन्। भारतमा एकैदिन एक हजार बढी मानिसको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ।